के हो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ? कोरोना महामारीमा माग उच्च - आर्थिक पाटी
के हो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ? कोरोना महामारीमा माग उच्च
२०७८-०१-३० बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढेसँगै सरकारले भएका अक्सिजन उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र अक्सिजन उत्पादनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिसकेको छ । अक्सिजन उद्योगहरुमा सिलिण्डर भर्नका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ ।
यसको प्रयोग अहिलेको महामारीको समयमा आइसोलेसन सेन्टर÷होल्डिङ सेन्टरहरुमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कुनै–कुनै कन्सन्ट्रेटर भने एक साथ एकभन्दा धेरै बिरामीलाई अक्सिजन दिन सकिने पनि हुन्छन् । तर यसको पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
एउटा कन्सन्ट्रेटरलाई कम्पनीअनुसार ४०–५० हजार रुपैयाँदेखि ३–४ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । एउटा अक्सिजन सिलिण्डरलाई बढीमा १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसलाई भर्दा १ हजार ५ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।
अलग–अलग बिरामीको लागि एउटै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रयोग गर्नु हुँदैन । यदि त्यसो गरियो भने इन्फेक्सनको खतरा रहन्छ । कुनै–कुनै कन्सन्ट्रेटर भने एक साथ एकभन्दा धेरै बिरामीलाई अक्सिजन दिन सकिने पनि हुन्छन् । तर यसको पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । एउटै डिभाइसबाट धेरैले अक्सिजन लिँदा पनि क्रस इन्फेक्सनको खतरा हुन्छ ।
काम नलाग्ने वस्तुबाट सुन्दर सृजना